Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Jonga ukuKhangela kwesikhululo senqwelomoya saseFrankfurt
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
IZiko elitsha labakhenkethi laseFraport liza kuvulwa nge-2 ka-Agasti, iTerrace yabaTyeleli kunye neeNdawo zokuTyelela iiNqwelo moya ngoku zisebenza kwakhona.
Iziko elitsha labakhenkethi le-multimedia eliza kuvulwa kungekudala kwiConcourse C yeTheminali 1.
Ukhenketho oludumileyo lwesikhululo seenqwelomoya luya kuphinda luqale ekuqaleni kuka-Agasti.
"Iifestile ze-Smart" zisebenzisa inyani yokwenyani ukuxhasa ifaskoti panorama ngedatha yexesha lokwenyani kwiinqwelomoya ezimileyo.
Isikhululo senqwelomoya saseFrankfurt izuza olunye umtsalane: iZiko elitsha labakhenkethi elinemultimedia eliya kuvulwa kungekudala kwiConcourse C yeTheminali 1. Indawo entsha ibeka ilizwe elinomtsalane kwesona sikhululo seenqwelomoya esikhulu eJamani. Lithuba labalandeli besikhululo seenqwelomoya sayo yonke iminyaka ukuba baphonononge ishishini lokuhamba ngenqwelomoya ngazo zonke izivamvo zabo. Ungathini ngokutyibilika kwindima yomthengisi omde kwaye ukhokele i-jet kwindawo yayo yokupaka? Ungayenza apha! Okanye ukwenzakalisa iitonela ezinamajiko zenkqubo yokuhambisa iimpahla yesikhululo seenqwelomoya? Mane ubeke i-headset yokwenyani kwaye uqalise ukuKhwela kweMoto! Indawo ephambili yomboniso, iGlobe, ikwakuvumela ukuba udlale amava ohambo ngenqwelomoya-kwaye ufunde ngendima ebalulekileyo edlalwa yiSikhululo senqwelomoya saseFrankfurt kuyo.
Indlela eya kulo mboniso ithatha i-1,200 yeemitha zesikwere ibonakaliswe ngokuqaqamba kwemivimbo ephezulu ehambelana ngqo neendlela ezisetyenziswa ziinqwelomoya ezinkulu ukuba zisuke nomhlaba. Kanye ekuqaleni, imodeli yesikwere seemitha ezingama-55 yesiXeko seSikhululo senqwelomoya (kwinqanaba le-1: 750) imema iindwendwe ukuba ziqale uhambo lokufumanisa. Le ngcaciso ichaziweyo yesikhululo seenqwelomoya kunye nezakhiwo zayo ezingama-400 ezingaqhelekanga zinokuphononongwa ngokusebenzisana kusetyenziswa i-iPad. Ngaphezulu kwamanqaku angama-80 edigital anika ubutyebi bolwazi olunomdla ngohlobo lweetekisi, iividiyo kunye noopopayi be3D. "Iifestile ze-Smart" zisebenzisa inyani yokwenyani ukuxhasa ifaskoti panorama ngedatha yexesha lokwenyani kwiinqwelomoya ezimileyo. Amabali abangel 'umdla malunga ne-zeppelins kunye neBerlin Airlift nazo zinokonwatyelwa kuhambo lokubuyela emva.
"I-Globe", udonga olukhulu lwe-LED olunezikrini ezingama-28, ezibonisa zonke iindiza eziqhubekayo phakathi kwe-FRA namanye amanqaku kwihlabathi liphela ngexesha lokwenyani. Yindlela enomtsalane yokufumana iwebhu enkulu yonxibelelwano lwehlabathi kunye nobunzima bokuhamba ngenqwelomoya.
Ukhenketho oludumileyo lwesikhululo seenqwelomoya luya kuphinda luqale ekuqaleni kuka-Agasti. I-Starter Tour ithatha imizuzu engama-45 kwaye ibandakanya ingxelo ebukhoma yokubonelela ngomtsalane wamanani, idatha kunye nezibakala kwisikhululo seenqwelomoya kunye nemisebenzi yayo. Utyelelo lwe-XXL lwemizuzu ye-120 lubonelela ngokujongeka ngakumbi emva kwemiboniso. Iindwendwe ziye zibukele ukusebenza komhlaba, ukuthatha uhambo kunye nokuhlala emhlabeni ngelixa zidlula kufutshane neenqwelomoya, kunye nokubamba isikhululo somlilo esitsha esingu-1 kunye neprojekthi yokwakha iTheminali 3 esemazantsi kwisikhululo seenqwelomoya.
Indlela egqibeleleyo yokujikeleza ukhenketho kwisikhululo seenqwelomoya kukonwabela umbono ovela kwiTerrace yabaTyeleli abadumileyo. Eli qonga kwiTheminali yesi-2 libonelela ngamehlo entaka ngeenqwelomoya ezivela kumhlaba wonke ukumisa nokususa kunye nomsebenzi ophithizelayo kwisikhululo seenqwelomoya. Ukubhiyozela ukuvulwa kwakhona, ukwamkelwa simahla ixesha elithile - ukuthimba inani labatyeleli nangaliphi na ixesha, nangona kunjalo, kubalulekile ukugcina ixesha.
Ukubhukisha kuyafuneka kuzo zonke izibonelelo kwaye kunokwenziwa kwivenkile yamatikiti e- www.fra-tours.com. Ngelishwa, okwangoku akukwazeki ukwenza njalo kwindawo. Ngexesha leeholide zesikolo zasehlotyeni kwilizwe laseJamani laseHesse, iindwendwe zeZiko leeNdwendwe zinokupaka mahala kwiindawo zokupaka zikawonke-wonke ze-FRA: thatha nje itikiti xa uqhuba kwaye uqinisekiswe ekungeneni kweZiko leeNdwendwe. Kananjalo kubakhenkethi bemini, isikhululo senqwelomoya iFrankfurt sihlala siyindawo efanelekileyo-ngokwendalo ngelixa sithobela imigaqo yangoku yokuthintela usulelo.
Kubalulekile ukwazi: NjengeNdawo yabaTyeleli, iZiko leeNdwendwe le-multimedia leFraport linokubhukishwa ukuze libambe iminyhadala yazo zonke iintlobo.